Raha eo am-piandrasana isika
"Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo ; ary aoka hianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin’ ny fampakaram-bady izy, ka nony tonga sy mandondòna izy, dia vohany miaraka amin’ izay." Lio. 12 : 35,36.
Izao no fotoana hiomanana ho amin'ny fiavian'ny Tompontsika. Tsy tratra ao anatin'ny fotoana fohy ny fahavononana hihaona Aminy. Ho fiomanana amin'izany fisehoan-javatra manan-tantara lehibe izany dia tsy maintsy atao am-pitandremana fatratra ny fiandrasana sy ny fiambenana, arahina asa vokatry ny fo. Ary vokatr'izany dia midera an'Andriamanitra ireo zanany. Eo anivon'ny trangan-javatra manahirana eo amin'ny fiainana dia ho re ny feon'izy ireo, izay milaza teny fampaherezana sy finoana ary fanantenana. Ny zavatra rehetra ananan'izy ireo sy ny mombamomba azy rehetra dia natokany ho amin'ny fanompoana ny Tompo (...)
Ambaran'i Kristy amintsika fa ho avy ny andro hametrahana ny fanjakany. Tsy milaza akory i Jesosy fa hiova fo avokoa izao tontolo izao, fa ny tiany hambara dia hoe : "hotorina amin’ izao tontolo izao ity filazantsaran’ ny fanjakana ity ho vavolombelona amin’ ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany." - Mat. 24 : 14. Ny fizarantsika ny filazantsara ho an'izao tontolo izao dia manome hery antsika hanafaingana ny fiavian'ilay andron'Andriamanitra. Raha toa ka nanatanteraka ny asa nampanaovina azy ny fiangonan'i Kristy, araka ny efa nandidian'Andriamanitra azy dia efa talohan'izao tontolo izao, ary tamin-kery sy voninahitra lehibe no nahatongavan'i Jesosy Tompo teto an-tany.
Tsy maintsy hery velona no manotrona sy manohana ny hafatra ny amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany. Tsy tokony hitsahatra isika mandra-pahitantsika fanahy maro miova fo ho amin'ilay fanantenana feno fitahiana ny amin'ny fiverenan'ny Tompo. Tamin'ny andron'ny Apostoly, ny hafatra nentin'izy ireo dia tena niteraka asa azo tsapain-tanana tokoa, ka nampiova fanahy hiala tamin'ny fanompoan-tsampy ho amin'ny fanompoana an'ilay Andriamanitra velona.
Tena zava-nisy ny asa atao amin'izao vanin'andro izao, ary ny fahamarinana amin'izao fotoana izao dia tena zava-marina tokoa ; tokony ho vonona hizara ny hafatra isika arakaraka ny maha-antomotra ny fiavian'ny Tompo. Hafatra tsara sy tsotra ary manan-danja lalina ny hafatra toriana amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy asehon-tsika amin'ny asantsika, fa isika dia (...) mino izany hafatra izany. Miandry, miambina, miasa , mivavaka, mampitandrina an'izao tontolo izao, ireo no asa sy andraikitsika.
Nahatalanjona ahy lalina tokoa ny fisehoan-javatra naseho ahy tsy ela akory izay tamin'ny fotoanan'ny alina. Toa nisy fihetsehana lehibe nitranga - Asa fifohazana - notanterahina ary nitohy tany amin'ny toerana maro. Nilahatra ny olontsika, namaly ny antson'Andriamanitra. Ry Rahalahy, miteny amintsika ny Tompo. Tsy handray ny antsony va isika ? Moa tsy hameno solika ny fanilontsika va isika, ary hiseho tahaka ny olona miandry ny fiavian'ny Tompony ?